Ming-Chi Kuo ayaa sheegay in gaariga Apple uu imaan karo sanadka 2025 uuna noqon doono mid aad qaali u ah | Waxaan ka socdaa mac
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan ka hadalnay marar badan xanta la xiriirta mashruuca Apple ee sameysato gaari kuu gaar ah, oo loogu magacdaray Apple Car saxaafadda. Waxay u muuqataa in Apple ay dib u bilaabatay Mashruuca Titan kuwaas oo aan aad uga hadalnay dhawr sano ka hor illaa sida laga soo xigtay ilo kala duwan, waa la joojiyay.
Waxaan kula biirayaa falanqeeyayaasha heerka hit sare Wax kasta oo la xiriira Apple, Ming-Chi Kuo, wuxuu cadeynayaa qoraalkii ugu dambeeyay ee uu u diray maalgashiyada, isla markaana Cult of Mac ay marin u heleen, in Apple Car ay suuqa soo gaari karto 2025 loona dejin doono sidii gaari aad u sarreeya.
Sida uu sheegayo falanqeeyahaan, qiimaha iyo qiimaha uu ka kooban yahay Apple Car wax badan ayuu ka sara mari doonaa kuwa aan ka heli karno gaari koronto oo aan adeegsanno. Intaa waxaa dheer, waxay sheegaysaa marka laga soo tago la shaqeynta Hyundai (sida laga soo xigtay ilo kala duwan), sidoo kale way gaareysaa heshiisyo lala galay shirkadaha Peugeot, Citroën, Opel iyo General Motors.
Xaaladda ugu fiican, Apple waxay soo saari kartaa Apple Car 2025In kasta oo ay tahay waqti aad u yar in la kobciyo baabuur laga soo bilaabo xoqidda, maaddaama tirada qaybaha uu ka kooban yahay gaariga korontadu uu u dhexeeyo 40 ilaa 50 jeer ka badan kan laga helo taleefannada casriga ah.
Gaariga Apple waxay ku saleysnaan doontaa qalabka gawaarida elektiroonigga ah in Hyundai soo bandhigtay dhamaadkii sanadka 2020 magaca E-GMP, madal ka kooban laba matoor, mashiinka isku dhafan ee isku dhafan, nidaamka lacag bixinta oo leh masaafo dhan 500 oo kiilomitir oo ay ku jiraan baytariyaal, baytariyaal lagu soo oogi karo ilaa 80% awoodeeda 18 daqiiqo oo keliya. Xawaaraha ugu badan waa 250 km / saacaddii wuxuuna xawaaraa 0 100 3,5 ilbiriqsi.
Hyundai ma cada
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, maamulka sare ee shirkadda Hyundai ma cadda in xiriirkan lala leeyahay Apple ayaa mira dhal noqon kara, maadaama aysan ahayn shirkad soo saarta gawaarida noocyo kale. Sidoo kale, Apple oo kuu sheegaysa sida loo sameeyo shaqadaada, adoo ah qof ku cusub arimahan, sifiican ulalama fariisan doono shirkadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Ming-Chi Kuo ayaa sheeganeysa in gaariga Apple uu imaan karo sanadka 2025 aadna uu qaali u noqon doono